Ukucwangciswa kweKhompyuter elungileyo yokuRekhoda kweKhaya
Nokuba ungakhetha eliphi iqonga lekhompyuter, izinto ozifumanayo ngaphakathi kwikhompyuter yakho zidlala indima enkulu ekumiseleni indlela egudileyo (okanye engaphantsi kunaleyo) i-Digital Audio Workstation (DAW) yakho ebalekayo.
Kuya kufuneka uthenge ikhompyuter onokuzinikezela ngokukodwa ukurekhoda iaudiyo, kuba ukusebenzisa ezinye iintlobo zezicelo (isoftware yezemali yasekhaya, iiprosesa zamagama, okanye imidlalo yevidiyo) kunokubangela iingxaki kwizicelo zakho zomsindo kwaye kunciphise uzinzo lwenkqubo yakho.
Olu luhlu lulandelayo lukucacisa kumaqhekeza ezixhobo zehardware ozifumana kwikhompyuter yakho:
ICPU: I-CPU (iprosesa) yintliziyo yesitudiyo sekhompyuter yakho. Isantya se-CPU yakho ekugqibeleni siyala ukuba inkqubo iqhuba njani kuyo. Njengomgaqo ngokubanzi, kwisandi, fumana iprosesa ekhawulezayo onokufikelela kuyo. Uninzi lwesoftware yeaudiyo, kufuneka ubuncinci i-CPU engundoqo.
Ukuba ufuna inkqubo enokujongana neemfuno zokurekhoda okanye ukuxuba iingoma ezininzi (ezingama-24 okanye ngaphezulu), kuya kufuneka uyiphakamise inotshi okanye ezimbini kwaye ufumane ikhompyuter eneprosesa ye-quad okanye yeeprosesa ezimbini okanye zeeprosesa eziphambili ( IMac okanye iPC- ayinamsebenzi).
Imemori: Iinkqubo zekhompyuter ezisekwe kwikhompyuter kunye nazo zonke iiplagi-ezinxulumene noko zii-RAM (imemori yokufikelela ngokungacwangciswanga) ii-hogs ukuze uthenge ii-RAM ezininzi. Kulungile, ayichazeki kakhulu, kodwa ukuba ufuna kangakanani kuxhomekeka kwisitayile sakho sokurekhoda.
Xa urekhoda kakhulu lengoma eziviwayo kunye ufuna Thumela okanye enye ukusebenza ngomhla kwingoma nganye, kufuneka RAM ngakumbi (kunye kumqhubekekisi ngokukhawuleza). Ukuba urekhoda ikakhulu ii-MIDI tracks ezinezixhobo esele zineziphumo ozifunayo, unokufumana nge-RAM encinci (kunye neprosesa ecothayo).
Kwiinkqubo ezininzi zesoftware, isixa esincinci esinconyelweyo se-RAM sijikeleze i-2GB (2 gigabytes), i-4GB iyacetyiswa ukuba isetyenziswe ngesiqhelo, kwaye i-8GB okanye nangaphezulu yenza ukuba inkqubo iqhubeke ngokutyibilikayo. I-RAM ayibizi kakhulu, ke fumana kangangoko unako.
Nokuba yeyiphi na iqonga olikhethayo (iPC okanye iMac), gcinani engqondweni ukuba ngekhe ube neprosesa ekhawulezayo okanye inememori eninzi.
Ukuqhuba nzima: Ukurekhoda umsindo, qiniseka ukuba ufumana uhlobo olululo lweedrive hard. Ewe, kuya kufuneka ufumane ngaphezulu kwesinye ukuba ufuna ukurekhoda ngaphezulu kweendlela ezimbalwa zomsindo.
Ufuna enye i-hard drive kuyo yonke isoftware kunye nenkqubo yokusebenza kunye nenye idrayivu yedatha yeaudio. Ukuba olu seto lwonyusa kakhulu amathuba okuba inkqubo yakho ihlale izinzile kwaye ingaphazami, ngakumbi ukuba uzama ukusebenzisa i-16 okanye nangaphezulu imikhondo.
Ngokumalunga nobungakanani behard drive, enkulu ibhetele, ubuncinci kwiidrive apho ugcina khona umculo wakho. Kwinkqubo yokuqhuba engundoqo, unokufumana nge-80GB (80-gigabyte) drive; Kwi-audio drive, nokuba ne-120 GB intle kakhulu ngenxa yokuba idatha yeaudiyo ingadla itoni yesithuba.
Khetha ii-hard drive zakho ngobulumko. Kwisoftware yedrive drive, unokufumana nge-stock drive (ihlala ileyo iza nekhompyuter yakho). Kodwa kwicala leaudiyo, ufuna idrive ekwaziyo ukujongana neemfuno zokudlulisa idatha yeaudiyo. Nazi izinto eziphambili ekufuneka ujonge kuzo kwi-audio drive:
Isantya yokuluka: Ikwabizwa ngokuba sisantya sokujikeleza, eli linqanaba apho i-hard drive ijikeleza. Ngokona nxalenye, i-7,200-rpm drive isebenza kakuhle ukurekhoda nokudlala umsindo.
ukopha rhoqo ngemirena
Funa ixesha: Eli lixesha elithathayo ukuqhuba ukufumana idatha egcinwe kuyo. Ufuna i-avareji yokufuna ixesha elingaphantsi kwe-10 milliseconds.
Ubungakanani bebuffer: Ihlala ibizwa ngokuba yi indawo yokugcina efihlakeleyo Izikhuseli ziiyunithi zememori ezigcina idatha njengoko idatha ihanjiswa. Ngokwabavelisi besoftware yokurekhodwa komsindo, kufuneka ubungakanani be-buffer ubuncinci be-2MB (2 megabytes), kodwa isikhuseli se-8MB siyacetyiswa.
Uhlobo lojongano: Ezinye iinkqubo zokurekhodwa komsindo, ezinje ngePro Tools, azisebenzisani kakuhle nee-USB 2.0 hard drive. Kuyacetyiswa ukuba uhambe nayo nayiphi na iFireWire (400 okanye 800) - okanye i-eSATA-edibeneyo yokuqhuba ngokuqhuba kakuhle.
Iziphumo ezibi ze-clindamycin
Ukusetyenziswa kwexesha elide kwe-aleve
Uthembisa codeine isiraphu yokukhwehlela
yenza ntoni i-gel eyahlukileyo